Damee turizimii daran cimsuun murteessaadha
Itoophiyaan qabeenya uumamaatiin badhaatuu ta'uusheetiin bakkeewwan hawwata turistii hedduu qabdi. Kana malees hojiilee namtolchee hawwata turistii ta'aniinis badhaatudha.
Haata'u malee qabeenyawwan kunneen bakki argamasaanii faca'aafi bu'uuraaleen misoomaa heddumminaan guutamuu dhabuusaatiin biyyattiin faayidaa damicharraa argachuu maltu argatteetti jechuuf nama rakkisa. Waggoota muraasaa as jijjiiramoonni jiraatanis ammayyuu xiyyeeffannaan damichaaf kenname ga'aa akka hintaane mootummaanis itti amanuudhaan kallattii xiyyeeffannaa addaa kennee hojjetaa jira.
Torban darbees Guyyaan Turizimii Addunyaa mataduree “Tuurizimii misooma waaraaf” jedhuun akka biyyoolessaatti yeroo 58ffaaf, akka biyyaatti ammoo yeroo 30ffaaf Oromiyaatti kabajameera. Kanaanis bakkeewwan hawwata turistii Oromiyaa keessa jiraniifi kan godinaalee Shawaa Lixaa, Wallagga, Buunoo Baddallee, Iluu Abbaa Boor, Jimmaafi Shawaa Kibba Lixaa keessatti argaman anga'oota mootummaa naannoofi fedeeraalaatiin daawwatamaniiru.
Xumura daawwannaa kanaarratti ibsa kan kennan Minsitir De'eetaan Ministeera Aadaafi Tuurizimii Aadde Ma’aazaa Gabramadiin daawwannichi milkaa’aa akka tureefi ministeerichi qabeenya damee kanaa irratti xiyyeeffatee hojjechuu akka qabu kan mul’ise ta’uu dubbataniiru.
Bakkeewwan kanneen misoomsuun faayidaa uummata naannichaaf akka oolaniifi guddina dinagdee biyyattii keessatti gahee isaanii akka bahaniif ministeerichi Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa waliin ta’uun akka hojjetu waadaa galaniiru.
Ittaanaa Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa Doktar Tashoomaa Kabbadaa gamasaaniitiin, haqa qabeessummaan sochii tuurizimii biyyattii keessatti taasifamaa ture hanqina akka qabuufi hanqina gama kanaan jiru furuuf ministeericha waliin mari’achuun kallattii xiyyeeffannoo fuulduraa kaa’uu danda’amuu isaa himaniiru.
Hojii damee kanaan hojjetamu cimsuudhaan faayidaa argamu dachaadhaan dabaluuf sadarkaa naannoottis ta'e fedeeraalaatti hojiin hojjetamuu eegaleera. Akka fakkeenyaattis bara bajataa 2010tti galii Doolaara biliyoona 4.5 galchuuf karoorri qabamuusaa Ministeerri Aadaafi Tuurizimii tibbana beeksiseera.
Biyyattiin waggaa darbe keessa labsii yeroo hatattamaa keessa waan turteef damichi xinnoo qabbanaa’ee kan ture yoo ta'u, kan bara 2008 waliin walbira qabamee yommuu ilaalamus % 2.5 gadi bu'eera.
Galiifi baay’ina turistootaa sadarkaa kanaan gadi bu’e waggaa kana guddisuuf ministeerichi ofiisaafi qooda fudhattoota waliin tumsuun hojjachuuf karoorfachuusaas beeksiseera. Karoora kana dhugoomsuufis torban tuurizimii Fulbaana 10 hanga 17tti kabajameen hojiin beeksisuu bal'inaan hojjetameera.
Akka waliigalaatti hojiin damee kanaan hojjetamu akka karoorfame xiyyeeffannaan yoo kennameef galiin irraa argamu olaanaadha. Kunimoo kallattiidhaan dinagdee biyyaa gudiisuurra darbee biyyattiif gama maraan carraa bal'aa kan uumu ta'uusaatiin qooda fudhattoonni hundi ga'eesaanii ba'achuuf cimanii hojjechuu qabu.
Torban kana/This_Week 33692
Guyyaa mara/All_Days 1625487